Led Lighting Fixture Solution & Pendant Light ထုတ်လုပ်သူ | Huayi အလင်းရောင်
Professional Leighting Shighting Solution
တရုတ်နိုင်ငံ၏ "Lighting Capital City ရှိ Guzhen မြို့ရှိ Guzhen မြို့ရှိ Guzhen မြို့ရှိ 1986 တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
r ကိုအထူးပြု&illumination ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သုံးခလုတ်ကို touch panel
1986 ခုနှစ်မှစ. ဂုဏ်သတင်းအမှတ်တံဆိပ်သည် 1986 ခုနှစ်မှစ. Huayi Lighting သည် Media Platform အမျိုးမျိုးတွင်အလင်းရောင်လုပ်ငန်းများကို ဦး ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွင်းပိုင်း၏အပြည့်အဝအကွာအဝေး& အပြင်ဘက်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် 200000 စတားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလင်းရောင်အရောင်းပြခန်းသို့မဟုတ် 200000SQM ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံစင်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါ။ အပတ်စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များသည် Huayi Showroom ပြသရန် Alibaba International နှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာများတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်& စက်ရုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်စီးပွားဖြစ်အလှဆင်ပစ္စည်းများအသစ်ရောက်ရှိလာ& အလင်းရောင်ပစ္စည်းများ,စက်မှုဆွဲချအလင်းစက်မှုစတိုင်အလင်း, ခေတ်သစ်စတိုင်အလင်း, ဖန်ဆိုင်းငံ့အလင်း,စိတ်ကြိုက်အလင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
သင့်ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကြိုဆိုပါတယ်။ အံ့သြစရာများစွာကမင်းကိုစောင့်နေကြတယ် ...
Alibaba / Facebook / Klumia / YouTube: Huyayilights
Emiras ၏ကုန်တိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Kempinski Hotel Dubai၊ အဆင့်မြင့်အလှဆင်ထားသောဟိုတယ်အခန်းများသည်စကျင်ကျောက်ရေချိုးခန်း၊ မြင်ကွင်းကျယ် LCD TV နှင့်ထမင်းစားခန်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အချို့အခန်းများသည်ဒူဘိုင်းနှင်းလျှောရွာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အိန္ဒိယ - Le Méridienဟိုတယ်
Le Méridienဟိုတယ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပြီးဖန်တီးမှုစိတ်ရှိသူတစ် ဦး အားခရီးသွားရာနေရာတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်မျှော်လင့်မထားသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ထုတ်သည် Le Méridienသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတို့၏ရွှေခေတ်တွင်အမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွားများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သောလူများ၏စုရုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုများနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဇိမ်ခံကားများ
အိန္ဒိယ - ဖီးနစ်စျေး
ယခင်က Phoenix Mills ဟုလူသိများသည့် High Street Phoenix သည်မွန်ဘိုင်း၊ Lower Parel တွင်တည်ရှိသောအိန္ဒိယရှိအကြီးဆုံးစျေးဝယ်စင်တာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စုစုပေါင်းကြမ်းခင်း3ရိယာမှာ 3,300,000 စတုရန်းပေရှိသည်။ အဆိုပါကုန်တိုက်အပြင်, compond ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်, multiplexing, commercoal အာကာသနှင့်လူနေအိမ်မျှော်စင်တည်ရှိသည်။
ကာဇက်စတန် -Hilton ဟိုတယ်
Hilton Astana, အနာဂတ်ဆန်းသစ်သော EXPO-2017 ပြပွဲတွင်းရှိခေတ်မီအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်။ သင်ဒီမှာရှိနေစဉ် ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်မြင့်ကိုခံစားပါ၊ ကျန်းမာရေး spa၊ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ bar၊ ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ၊ အတွင်းပိုင်းရေကန်၊ ၎င်းသည်မြို့လယ်ခေါင်နှင့်အဆောက်အအုံများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းရုံးများ၊ ကာဇက်စတန်အစိုးရဌာနများနှင့်အေဂျင်စီများနှင့်အက်စ်တာတန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တို့တွင်ဖြစ်သည်။